Business Career Advice Help & Support Job Search Skills Upgrade Yourself
Ted Patrick Boglosa ဆိုသူကတော့ ရန်ကုန်အခြေစိုက် အများနှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော ဈေးကွက်ဆိုက်ရာ ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Meridian Myanmar မှာ ဒီဇိုင်းနှင့် ထုတ်လုပ်ရေးပိုင်းမှာ စီစဉ်ညွှန်ကြား သူအနေဖြင့် အလုပ်လုပ်နေသူတစ်ဦးပါ။ Ted က သူရဲ့ပထမဦးဆုံး ဘယ်လိုအလုပ်ရခဲ့သလဲဆိုတဲ့ အတွေ့ အကြုံကိုတွေကို Whynee ကနေပြီး မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်အခု အသက်၃၀ပါ။ ကျွန်တော်ရခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးအလုပ်ကို ဘယ်လိုရခဲ့တဲ့အကြောင်းကို ပြောရရင် တကယ်ကိုရီမိပါတယ်။ ရီစရာကောင်းတဲ့ အရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ကြိုးစားလေ့လာ သင်ယူခဲ့ပုံကိုပြန်မြင်ပြီး ကျေနပ်ပီတိဖြစ်ရပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့ Cebu ကျွန်းမှာတုန်းက အချိန်တွေကို ပြန်သွားလိုက်ရအောင်။
ကျွန်တော် ၂၀၀၈တုန်းက Sky Cable (Cebu Branch)မှာ ကျွန်တော်အလုပ်သင်ကိုပြီးအောင် ကြိုးစားနေခဲ့ပါတယ်။ Intenational Academy of film and Television (IAFT) မှာ ပညာသင်နေတုန်း အချိန်တွေအများကြီးပေးခဲ့ရတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော် သင်တန်းအောင်မြင်ဖို့အတွက် အလုပ်သင်ပြီး မြောက်ကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးပေမဲ့ ဆရာရှိခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်ရဲ့ ဆရာMrs Glynda Descatan လည်း ကပဲ ကျွန်တော်ကို IAFT ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ ဒါ့အပြင် သူကပဲ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး ပညာရပ်ကိုဆက် လက်လေ့လာဖို့ အားပေးခဲ့တယ်။ ဒီကျွန်တော်ရဲ့ အိပ်မက်ကို ဆက်လက်ဖော်ဆောင်ဖို့အတွက် ကျွန်တော် တက္ကသိုလ်ကနေ လေးခုမြောက်ဘာသာရပ်ကို လေ့လာနေတုန်းရပ်နားခဲ့ရတယ်။ အလုပ်သင်လဲပြီး၊ IAFT ကလဲ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး diploma ရပြီးတဲ့နောက် ကျွန်တော်စီစဉ်ညွန်ကြားသူနှင့် ထုတ်လုပ်သူအဖြင့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့ အကြီးမားဆုံးသော ကြေးနန်းသုံးရုပ်မြင်သံကြား ကုမ္ပဏီ Sky Cable မှာ ပထမဆုံးအလုပ် ကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်ပထမဆုံး အလုပ်ရခဲ့ပုံကတဆင့် ဒီအဓိကသုံးချက်ကို ဖော်ပြချင်ပါတယ်။
၁။ စူးစိုက်နှစ်မြုတ်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့် စိတ်ဓာတ်ကြံခိုင်ခြင်း
ကျွန်တော်တို့အယောက်စီတိုင်းမှာ အိမ်မက်တွေရှိကြမှာပါ။ ဖျော်ဖြေရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းခွင် မှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်ဖို့ဆိုတာက ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ပါ။ တက္ကသိုလ်က ထွက်လိုက်တုန်းက အခြေအနေဆိုး တွေရှိခဲ့သော်လည်း တစ်ဖက်မှာ ကျွန်တ်ာအိမ်မက်ပန်းတိုင်အတွက် စူးစိုက်နှစ်မြုတ်အားစိုက်နိုင်တဲ့ အခွင့်အ ရေးကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်ရဲ့ အိမ်မက်တွေ အကောင်အထည်ပေါ်လာဖို့အတွက် စိတ်ဓာတ်ကြံခိုင်စွာ ဆုံးဖြတ်ချက်ပြီး ဒီလမ်းကိုပဲ ရဲ့ဝံ့စွာဆက်လက်လျောက်လာခဲ့ပါတယ်။
ကျွမ်းကျင်မှုတည်ဆောက်ခြင်းဆိုတာက မိမိရဲ့အိမ်မက်နှင့် ပန်းတိုင်တွေအတွက် လိုအပ် ချက်များကို တစ်ဆင့်ခြင်းတည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ တာဝန်ကများကနေ လိုအပ်တဲ့
အရည်အချင်းတွေကို ကျွမ်းကျင်အောင်တည်ဆောက်လာနိုင်မှာပါ။ အချိန်နဲ့ အလေ့အကျင့်များကလည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပြည်စုံသောကျွမ်းကျင်ခြင်းကိုရရှိအောင် ပံ့ပိုးပေးမှာပါ။
အနာဂတ်များအချိတ်အဆက်ပြန်လုပ်နိုင်မဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကွန်ရက်တစ်ခုကိုရယူပါ။ ကျွန် တော်တို့ ကိုယ့်အလုပ်ကို အကောင်းဆုံး လုပ်နိုင်သော်ညားလည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စွမ်းရည်တွေကို သူတစ် ပါးမသိတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အိမ်မက်တွေကို အကောင်အထည်မဖော်နိုင်ပါဘူး။ စကားဝိုင်းတွေ၊ တွေ့ဆုံပွဲတွေ၊ အစည်အဝေးတွေပါဝင်တက်ရောက်ပါ။ ပညာရှင်များနှင့် တွေ့ဆုံမိတ်ဖွဲ့ပါ။ ကျွန်တော်တို့ အသိမိတ်ဆွေများလေလေ ကွန်ရက်ကောင်းတည်ဆောက်ဖို့ လွယ်လေလေဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အလွန်ကိုတိုးတက်ကြီးမားလာတဲ့ ဈေးကွက်နဲ့ ပြင်းထန်အားကြီးတဲ့ အပြိုင်အ ဆိုင်တွေကား ပထမဆုံးအလုပ်ကောင်းရဖို့ဆိုတာက ပန်းခင်းလမ်းလျောက်ရသလိုမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော် ရဲ့ အလုပ်ရခဲ့ပုံ အတွေ့အကြုံတွေကနေသင်ယူပါ။ ဒီအတွေ့အကြုံလေးတွေကလည်း အထောက်အကူပြု မယ်လို့ မျော်လင့်ပါတယ်။ စူးစိုက်နှစ်မြုတ်လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကြံခိုင်ခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှု၊ ကွန်ရက် စသော အချက်များကိုအမမြဲသတိရပါ။
Ted Patrick Boglosa ဆိုသူကတော့ ရနျကုနျအခွစေိုကျ အမြားနှငျ့အတူပူးပေါငျးဆောငျရှကျသော ဈေးကှကျဆိုကျရာ ကုမ်ပဏီဖွဈတဲ့ Meridian Myanmar မှာ ဒီဇိုငျးနှငျ့ ထုတျလုပျရေးပိုငျးမှာ စီစဉျညှနျကွား သူအနဖွေငျ့ အလုပျလုပျနသေူတဈဦးပါ။ Ted က သူရဲ့ပထမဦးဆုံး ဘယျလိုအလုပျရခဲ့သလဲဆိုတဲ့ အတှေ့ အကွုံကိုတှကေို Whynee ကနပွေီး မြှဝသှေားမှာဖွဈပါတယျ။
ကြှနျတျောအခု အသကျ၃၀ပါ။ ကြှနျတျောရခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးအလုပျကို ဘယျလိုရခဲ့တဲ့အကွောငျးကို ပွောရရငျ တကယျကိုရီမိပါတယျ။ ရီစရာကောငျးတဲ့ အရာတော့မဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ ဒီလမျးကွောငျးပျေါမှာ ကွိုးစားလလေ့ာ သငျယူခဲ့ပုံကိုပွနျမွငျပွီး ကနြေပျပီတိဖွဈရပါတယျ။ လှနျခဲ့တဲ့ ဆယျနှဈ၊ ဖိလဈပိုငျနိုငျငံရဲ့ Cebu ကြှနျးမှာတုနျးက အခြိနျတှကေို ပွနျသှားလိုကျရအောငျ။
ကြှနျတျော ၂၀၀၈တုနျးက Sky Cable (Cebu Branch)မှာ ကြှနျတျောအလုပျသငျကိုပွီးအောငျ ကွိုးစားနခေဲ့ပါတယျ။ Intenational Academy of film and Television (IAFT) မှာ ပညာသငျနတေုနျး အခြိနျတှအေမြားကွီးပေးခဲ့ရတယျ။ ပွီးတော့ ကြှနျတျော သငျတနျးအောငျမွငျဖို့အတှကျ အလုပျသငျပွီး မွောကျကွောငျး လကျမှတျရေးထိုးပမေဲ့ ဆရာရှိခဲ့တယျ။ ကြှနျတျောရဲ့ ဆရာMrs Glynda Descatan လညျး ကပဲ ကြှနျတျောကို IAFT ကိုမိတျဆကျပေးခဲ့တာပါ။ ဒါ့အပွငျ သူကပဲ ရုပျရှငျရိုကျကူးရေး ပညာရပျကိုဆကျ လကျလလေ့ာဖို့ အားပေးခဲ့တယျ။ ဒီကြှနျတျောရဲ့ အိပျမကျကို ဆကျလကျဖျောဆောငျဖို့အတှကျ ကြှနျတျော တက်ကသိုလျကနေ လေးခုမွောကျဘာသာရပျကို လလေ့ာနတေုနျးရပျနားခဲ့ရတယျ။ အလုပျသငျလဲပွီး၊ IAFT ကလဲ ရုပျရှငျရိုကျကူးရေး diploma ရပွီးတဲ့နောကျ ကြှနျတျောစီစဉျညှနျကွားသူနှငျ့ ထုတျလုပျသူအဖွငျ့ ဖိလဈပိုငျနိုငျငံရဲ့ အကွီးမားဆုံးသော ကွေးနနျးသုံးရုပျမွငျသံကွား ကုမ်ပဏီ Sky Cable မှာ ပထမဆုံးအလုပျ ကို ရရှိခဲ့ပါတယျ။
ကြှနျတျောပထမဆုံး အလုပျရခဲ့ပုံကတဆငျ့ ဒီအဓိကသုံးခကျြကို ဖျောပွခငျြပါတယျ။
၁။ စူးစိုကျနှဈမွုတျလုပျကိုငျခွငျးနှငျ့ စိတျဓာတျကွံခိုငျခွငျး
ကြှနျတျောတို့အယောကျစီတိုငျးမှာ အိမျမကျတှရှေိကွမှာပါ။ ဖြျောဖွရေေးဆိုငျရာ လုပျငနျးခှငျ မှာ အလုပျလုပျကိုငျဖို့ဆိုတာက ကြှနျတျောရဲ့အိမျမကျပါ။ တက်ကသိုလျက ထှကျလိုကျတုနျးက အခွအေနဆေိုး တှရှေိခဲ့သျောလညျး တဈဖကျမှာ ကြှနျတျာအိမျမကျပနျးတိုငျအတှကျ စူးစိုကျနှဈမွုတျအားစိုကျနိုငျတဲ့ အခှငျ့အ ရေးကိုရရှိခဲ့ပါတယျ။ ကြှနျတျောရဲ့ အိမျမကျတှေ အကောငျအထညျပျေါလာဖို့အတှကျ စိတျဓာတျကွံခိုငျစှာ ဆုံးဖွတျခကျြပွီး ဒီလမျးကိုပဲ ရဲ့ဝံ့စှာဆကျလကျလြောကျလာခဲ့ပါတယျ။
ကြှမျးကငျြမှုတညျဆောကျခွငျးဆိုတာက မိမိရဲ့အိမျမကျနှငျ့ ပနျးတိုငျတှအေတှကျ လိုအပျ ခကျြမြားကို တဈဆငျ့ခွငျးတညျဆောကျခွငျးဖွဈပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ တာဝနျကမြားကနေ လိုအပျတဲ့
အရညျအခငျြးတှကေို ကြှမျးကငျြအောငျတညျဆောကျလာနိုငျမှာပါ။ အခြိနျနဲ့ အလအေ့ကငျြ့မြားကလညျး ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ပွညျစုံသောကြှမျးကငျြခွငျးကိုရရှိအောငျ ပံ့ပိုးပေးမှာပါ။
အနာဂတျမြားအခြိတျအဆကျပွနျလုပျနိုငျမဲ့ ပတျဝနျးကငျြကှနျရကျတဈခုကိုရယူပါ။ ကြှနျ တျောတို့ ကိုယျ့အလုပျကို အကောငျးဆုံး လုပျနိုငျသျောညားလညျး ကြှနျတျောတို့ရဲ့ စှမျးရညျတှကေို သူတဈ ပါးမသိတဲ့အခါမှာ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ အိမျမကျတှကေို အကောငျအထညျမဖျောနိုငျပါဘူး။ စကားဝိုငျးတှေ၊ တှဆေုံ့ပှဲတှေ၊ အစညျအဝေးတှပေါဝငျတကျရောကျပါ။ ပညာရှငျမြားနှငျ့ တှဆေုံ့မိတျဖှဲ့ပါ။ ကြှနျတျောတို့ အသိမိတျဆှမြေားလလေေ ကှနျရကျကောငျးတညျဆောကျဖို့ လှယျလလေဖွေဈပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံရဲ့ အလှနျကိုတိုးတကျကွီးမားလာတဲ့ ဈေးကှကျနဲ့ ပွငျးထနျအားကွီးတဲ့ အပွိုငျအ ဆိုငျတှကေား ပထမဆုံးအလုပျကောငျးရဖို့ဆိုတာက ပနျးခငျးလမျးလြောကျရသလိုမဟုတျပါဘူး။ ကြှနျတျော ရဲ့ အလုပျရခဲ့ပုံ အတှအေ့ကွုံတှကေနသေငျယူပါ။ ဒီအတှအေ့ကွုံလေးတှကေလညျး အထောကျအကူပွု မယျလို့ မြျောလငျ့ပါတယျ။ စူးစိုကျနှဈမွုတျလုပျဆောငျခွငျး၊ စိတျဓာတျကွံခိုငျခွငျး၊ ကြှမျးကငျြမှု၊ ကှနျရကျ စသော အခကျြမြားကိုအမမွဲသတိရပါ။
Ted Patrick Boglosa is the Director of Design and Production with Meridian Myanmar,aYangon based, collaborative, full 360º marketing company based in Yangon. Ted shares with Wynee his experience in getting his first job:
I’m currently 30 and looking back on how I got my first job makes my lips curl intoasmall smile – not that its funny, but it’saheartwarming feeling to see how far I’ve gone in this professional journey. Let’s travel back, 10 years ago, to the Philippines, in the island of Cebu…
In 2008 I was finishing my internship with SkyCable (Cebu Branch). I needed to put in the hours and have my supervisor sign my internship card asarequirement to graduate from the filmmaking course that I was in at the International Academy of Film and Television (IAFT). My supervisor, Mrs. Glynda Descuatan, introduced me to IAFT and encouraged me to pursue filmmaking. To pursue this dream, I had to drop out of university while doing my fourth college major. After my internship and getting my international diploma in filmmaking from IAFT, I landed my first job asadirector/producer for SkyCable, Philippine’s biggest cable TV provider.
Asking myself again, “how I got my first job”, I can break it down into three points:
Dedication and Determination – we all have dreams and it was my dream to to work in the entertainment industry. Even though I would have to risk leaving university, I took the chance and became dedicated to my goal. I was determined to achieve my dreams and pursued the route which could lead me there.
Skill Structuring – skill structuring is the legwork to build capacities needed by you to reach your dreams and goals! Through skill structuring, you will see positive development in your capacity to undertake the work required of you and through time and practice, you get to hone your skill to perfection.
Network Building – build the professional network that you can leverage in the future! You could be the best in what you do but if you don’t know anybody or nobody knows you or your skills, you wouldn’t be able to reach your dreams! Attend networking meetups, join conferences, conventions, talks – put yourself out there and meet industry professionals! The more people you know, the easier it is.
With Myanmar’s market growing bigger and bigger and competition getting tougher and tougher, landing your first job might not beawalk in the part. But do consider my own reflection of how I was able to land my first job and I hope this helps you land yours. Always remember: Dedication, Determination, Skills, Network!
PWC Publishes Report on Doing Business in Yangon 2018